Dadka - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Fariin ka timid CEO
Kalsoonida, wax soo saarka iyo hal-abuurka ayaa ah qaybaha ugu muhiimsan ee jawiga ganacsiga caalamiga ah maanta.Hadafka shirkadeena waa in la beegsado si loo daboolo baahiyahan.
XY Tower Co., Ltd. waxaa la helay 2008 markii ay ahayd shirkad bilow ah.Iyadoo ay hogaaminayaan maamulka iyo dadaalka dhammaan shaqaalaha, XY Tower hadda waxay soo saartay xirfadle soo saaraha munaaradda iyo mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee warshadahan ee galbeedka Shiinaha.
Tower XY waxay bixisaa "dukaanka hal-joojin" oo loogu talagalay ganacsiga qalabka korontada, naqshadeynta munaaradda iyo soo saarista munaaradda.
Iyada oo ay taageerayaan maamulka khibradda leh iyo injineerada xirfadleyda ah, XY Tower waa in ay siiso badeecado iyo adeeg tartan ah macaamiisheena.Tower XY waxay leedahay dhammaan qodobada;tignoolajiyada, nidaamyada maaraynta, dadka iyo xoogga dhaqaale si ay u noqdaan adeeg bixiye hormuud ka ah Shiinaha iyo dibaddaba.
Waxaan leenahay koox xirfad leh oo la isku halayn karo.Waxaan nahay waayo-aragnimo aad u yaqaan sida loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha.Waxaanan kalsooni ku qabnaa inaan sameyno xal aad u wanaagsan oo aan hubinno in xalalkeena ay si buuxda u shaqeeyaan, si hufan u shaqeeyaan oo ay noqdaan kuwo dabacsan mar walba.
Maamulkayagu wuxuu leeyahay celcelis ahaan 30 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah oo ku saabsan warshadahan wuxuuna ku faraxsan yahay fursadaha ganacsi ee ka jira suuqa.
Waan ku faraxsanahay inaan arko nidaamyada maamulka qaangaadhka ah, shaqaale saaxiibtinimo leh oo xamaasad leh iyo koox xirfad leh si ay u daboolaan baahiyaha ganacsi ee hadda iyo mustaqbalka.Hadda waa macaamiisheena qiimaha leh inay go'aansadaan, ilaa intee XY Tower ku guulaysatay inay la kulanto ama dhaafto waxay filayeen oo ay nagu abaalmariyaan jawaab celin daacad ah si aan si wanaagsan ugu adeegno.
Waxaan si dhab ah u rajeynayaa in macaamiishayada cusub iyo kuwa caadiga ah, aan abuurno mustaqbal wanaagsan si wadajir ah!
Chunjian Shu (guddoomiyaha guddiga)
Mr. Shu waa injineer sare oo koronto ah oo khibrad 40 sano ah u leh warshadaha korontada.Waxa uu lahaa 20 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah oo ku saabsan khayraadka biyaha iyo tamarta korontada ee dawladda gobolka Sichuan ka dibna waxa uu bilaabay oo uu maamulay ganacsi aad u guulaysatey ee korontada iyo warshadaha isgaarsiinta.
Mr. Shu waxa uu shaqo aad u wanaagsan ka soo qabtay laamaha dawladda iyo maareynta horumarinta ganacsiga.Waxa uu muujiyay hogaamintiisa oo uu leeyahay maskax aad u cusub oo naftiisa ku jirta.
Mr. Shu waxa uu kaalin weyn ka qaatay horumarinta dhiirigelinta iyo xirfadda sare
kooxda xirfadlayaasha ah.Isagu waa hogaamiye ganacsi oo wax ku ool ah wuxuuna hirgeliyay fikrado badan oo cusub oo lagu dhisayo qalabyada korantada.Mr. Shu waa nin rajo fiican leh, wuxuuna aaminsan yahay inuu si adag u shaqeeyo.Waxa uu u heellan yahay in uu qiimo u yeesho saamilayda iyo bulshadaba.
Yong Lee (Maamulaha Guud)
Mr. lee, oo ka qalin jabiyay daawaynta dusha birta ee Hebei University of Science & Technology.
Mr. Lee waxa uu shaqadiisa ka bilaabay Bureau of Geological Prospecting ee koonfur-galbeed Shiinaha 1980-meeyadii.Dabadeed waxa uu u shaqaynayey tawer-fare-sare oo dawladdu leedahay oo ay ka shaqaynayeen 700 oo qof muddo 20 sano ah.
Mr. Lee waxa uu khibrad aad u qani ah u leeyahay la shaqaynta hay’ado kala duwan oo ay ka mid yihiin waaxda dawladda, shirkad ay dawladdu leedahay iyo shirkado gaar loo leeyahay.Waxa uu leeyahay rikoor la xaqiijiyay oo ah in uu si guul leh u maareeyo shirkad wax soo saar oo baaxad leh.
Hogaamiye ahaan, karti uu u leeyahay inuu abaabulo koox dareen leh oo si fiican isku xidhan oo la jaanqaadaysa aragtidiisa ayaa u sahashay shirkaddu inay gaadho meel lagu ammaano dalka.
Mr. Lee waa khabiir ku xeel dheer warshadaha galvanized-ka kulul oo sumcad ku leh koonfur-galbeed ee Shiinaha.Waxa uu xirfad u leeyahay la tacaalidda daawaynta dusha sare ee munaaradda gaarka ah ee aagga daxalka sareeyo.
Willard Yue Shu (Agaasimaha ganacsiga dibadda)
Mr. Shu waxa uu shahaadada Master-ka ee maamulka iyo maaliyadda caalamiga ah ka qaatay Jaamacadda Glasgow ee dalka Britain.Waxa uu leeyahay toban sano oo waayo-aragnimo shaqo oo horusocod ah oo ku saabsan machadka Capital Venture.Waxa uu maamulayaa arrimaha maaliyadda, shaqaalaha iyo ganacsiga dibadda.Aad ayuu ugu faraxsan yahay horumarka shirkadda iyo hal-abuurka farsamada.
Wuxuu si fiican u fahmay farsamooyinka maaraynta ganacsiga casriga ah wuxuuna leeyahay gacmo qani ah oo khibrad u leh qaybaha qiimaynta kharashka, qorsheynta mashruuca, iyo maalgashiga hi-tech ee bilowga ah.Waxa uu leeyahay karti heersare ah oo uu ku hogaamiyo koox oo uu ku bixiyo adeeg ka sarreeya filashada macmiilka.
Waxa kale oo uu hormuud ka ahaa dadaalkii lagu aasaasay ganacsiga dibadda ee shirkadda.Hoggaamintiisa firfircoon iyo aragti ballaadhan oo caalami ah ayaa u horseedi doonta shirkadda inay ballaariso aragtideeda ka baxsan xuduudaha gudaha.
Injineer mashruuc oo madax ah, oo leh 20 sano oo munaaradaha birta ah oo khibrad shaqo ah, khabiir si fiican loo yaqaan gaar ahaan xagga munaaradda gudbinta birta malaa'igta.Kooxda injineerku waxay ka kooban tahay 6 qof, mid kastaa wuxuu leeyahay 5-20 sano oo khibrad shaqo ah.Injineerada qaarkood waxay ku fiican yihiin munaaradaha gudbinta qaarna waxay ku fiican yihiin munaaradaha isgaarsiinta.Dhammaan injineerada waxay isku dayi doonaan inay helaan xal dhamaystiran mashruuc kasta oo leh khibradooda weyn.
Maareeyaha wax soo saarka, oo leh 16 sano oo waayo-aragnimo wax-soo-saarka munaaradda ah, kaas oo mas'uul ka ah maaraynta wax soo saarka munaaradda laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa alaabta dhammaatay.Kooxda wax-soo-saarka waxa ku jira 115 qof, waxaana sannadkii la soo saari doona 30,000 oo tan oo bir ah.
Horjoogaha galvanizing Hot Quful, kaas oo ku hawlanaa warshadaha galvanizing muddo 25 sano ah, inta badan mas'uul ka ah galvanizing ee noocyada qalabka birta, oo hogaaminaya koox ka kooban 30 qof, oo leh khibrad qani ah si loo dammaanad qaado tayada HDG.
Injineer sare ee sawir-qaadista, oo leh 11 sano oo waayo-aragnimo shaqo ah.Kooxda oo dhami waa 5 qof, mid kastaa wuxuu kaliya ku qaataa 3-5 maalmood si uu u dhammeeyo dabaqa 1 nooc ee sawirka munaaradda.
Kormeeraha alaabta, waxaa jira 5 qof oo ka mid ah kooxda baarista alaabta, qof kastaa wuxuu haystaa shahaadada "shahaadada shahaadooyinka shaqaalaha tijaabinta qalabka", waxay hubin doonaan in heerka baaska alaabada uu ka weyn yahay ama la mid yahay 99.6%, warshaduna ay dhaafto heerka waa 100%.
Sales Rep, Shirley Song waa saaxiibtinimo, bukaan, iyo iib xirfad leh, kaas oo ka shaqaynayey XY Towers in ka badan 10 sano si fiicanna u yaqaan munaaradda birta.
Sales Rep, gabar aad u qiimeeya macmiilka oo si qoto dheer ugu hanweyn nafteeda iib ahaan, aad u xiisaynaysa munaaradaha birta, waxay rajaynaysaa inay bixiso xalka ugu fiican ee macmiil kasta.
Zhonghai He Madaxa Waaxda Saadka
Wuxuu mas'uul ka ahaa saadka gudaha iyo dibadda 12 sano ee XY Tower.Yaa aad u yaqaan qaybinta iyo raridda weelasha&dekedaha u dhigma noocyada badeecadayada.